RW Soomaaliya Sharmaake oo u jeediyay dadkii ka barakacay Gaalkacyo in ay dib ugu soo noqdaan guryahoodii - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandRW Soomaaliya Sharmaake oo u jeediyay dadkii ka barakacay Gaalkacyo in ay dib ugu soo noqdaan guryahoodii
November 19, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Raysulwasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. [Sawirka: Reuters]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ugu baaqay dadkii ka barakacay magaalada Gaalkacyo in ay dib ugu soo noqdaan guryahooda ayna dib u dhistaan noloshoodii.
Sharmaake ayaa hadalkan sheegay shalay oo Jimce ahayd markii Puntland iyo Galmudug ay bilaabeen in ciidamadooda ay kala baxaan jiida hore ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug kadib heshiis xabad-joojin ah oo ay garwadeen ka ahaayeen RW Sharmaake iyo saraakiil Qaramada Midoobay katirsan.
In ka badan 50 qof oo u badan ciidamada dagaalamay ayaa ku geeriyooday dagaalka ka dhacay Gaalkacyo oo bilaabmay bilowgii bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar.
Ku dhawaad 90,000 shacab ah ayaa ku barakacay colaada Gaalkacyo, sida ay sheegtay UNHCR.
November 16, 2016 Camay: ISIS ma ay sii haysan doonaan Qandala
Madaxweynaha dowladda Puntland oo dallacsiiyay saraakiil katirsan ciidamada Daraawiishta Puntland oo Itoobiya tababar kusoo qaatay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haayada Sirdoonka iyo Ammaanka Qaranka ee NISA ayaa xirtay ugu yaraan sagaal qof oo lala xiriirinayo qarax gaari oo ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay ku warantay wakaalada wararka dowladda ee [...]